I-15 iiyunivesithi zamaKristu eziphezulu kwi-USA 2022
January 23, 2022 Eze uThadayo
I-15 iiyunivesithi zamaKristu eziphezulu eMelika
Iiyunivesithi zamaKristu e-USA zikwabonelela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi kwaye zigqwesa zombini kwiindawo zophando kunye nokufundisa. Ezinye zazo zisekwe ngamaziko obuKristu ngelixa ezinye zinxulumana nje nazo, oku akuwehlisi nangayiphi na indlela umgangatho wemfundo.
Ukuba uhlala ufuna ukuya eyunivesithi yamaKrestu e-United States, mhlawumbi ngenxa yesizathu sakho okanye esinye isizathu, eli nqaku liza kukukhokela ekukhetheni efanelekileyo. Kukho amakhulukhulu eedyunivesithi zamaKristu e-USA kwaye iya kuba ngumsebenzi onzima ukuba ushiywe udlula nganye kuzo ujonge kwaye uphande ngeyona ikulungeleyo.
Ukuba awusenayo engqondweni idyunivesithi okanye ikholeji ofuna ukuya kuyo ke awunayo enye indlela ngaphandle kokuba uqalise ukuphanda enye. Ukusebenzisa iwebhu okanye ukubuza abantu, njengootitshala bakho kunye nokusebenzisa umlomo ukuze wazi ukuba yeyiphi ekulungeleyo. Ngelixa ilizwi lokuphanda ngomlomo lisebenza ngokukuko, ayizukukunika impendulo enzulu kwaye usaya kufuneka uye kwiwebhu ukuze wenze uphando oluthe kratya.
Sipapashe amanqaku amanqaku kwizikolo ezahlukeneyo, iindawo, izifundi kunye namathuba emali, ukufunda nge-Intanethi kunye nemfundo emgama, nezinye ezininzi. Ke, ukuba ayisiyiyo le nto uyikhangelayo, ziiyunivesithi zamaKristu eMelika, vele uskrolele ezantsi kwesi sithuba, phantsi kwecandelo “lengcebiso”, ungafumana amanqaku apapashiweyo anokuba nomdla kuwe.
Ngoku, makhe sibuyele kumxholo ophambili...
Iiyunivesithi zamaKristu e-USA zilungile ngokwemfundo njengazo naziphi na ezinye iiyunivesithi okanye iikholeji zase-US. Uninzi lwazo luphuma phakathi kweeyunivesithi ezikumgangatho ophezulu kwihlabathi nase-US ngokwamanqanaba ahlukeneyo. Ngelixa kukho i-100+ yezi zikolo, senze uphando olubanzi kwaye saqulunqa uluhlu lwezona yunivesithi zili-15 zibalaseleyo zamaKristu e-USA kwesi sithuba sebhlog onokuthi ukhethe kuzo.
Indima yeeDyunivesithi zamaKrestu eMelika
Iimfuno zokufaka isicelo kwiYunivesithi yamaKristu
Iiyunivesithi zamaKristu eziGqwesileyo eMelika
1. IYunivesithi yasePepperdine
2. IYunivesithi yaseTaylor
3. Ikholeji ye-Ozarks
4. Ikholeji yase Wheaton
5. IYunivesithi yaseWesile
6. IYunivesithi yaseBrigham Young
7. IYunivesithi yaseCalvin
8. IYunivesithi yaseLiberty
9. Ikholeji yaseWestmont
10. IYunivesithi yasentshona
11. IYunivesithi yaseBaylor
12. IYunivesithi yaseConcordia i-Irvine
13. IYunivesithi yaseNorth Central
14. IYunivesithi yase Samford
15. IYunivesithi yaseWhitworth
Zingaphi iiyunivesithi zamaKristu eMelika?
Yeyiphi eyona kholeji yobuKristu eMelika?
Yeyiphi eyona yunivesithi inkulu yabucala yabucala eMelika?
Yeyiphi eyona kholeji yamaKristu ifikelelekayo eMelika?
Indima yeeyunivesithi zamaKristu e-USA kukuba zisebenza njengokhetho oluchanekileyo lweziko labafundi abafuna ukulandela ikhondo lezakwalizwi kunye neminye imisebenzi efuna ulwazi lobuKristu kunye neBhayibhile.
Iimfuno zokufaka isicelo kwiiyunivesithi zamaKristu e-USA ziyahluka ngokwesikolo, kodwa ngezantsi yimfuneko ngokubanzi;
Abafake izicelo kufuneka bangenise imibhalo esemthethweni evela kwisikolo samabanga aphakamileyo okanye nayiphi na ikholeji ekuyileyo
Ngenisa iziphumo ezisemthethweni ze-ACT, SAT, okanye i-CLT (uVavanyo lokuFunda lweClassic). I-GED nayo inokwamkelwa.
Ifom yesimo somntu ongumKristu evela kubulungiseleli okanye kwinkokeli yecawa onokuthi udibane nayo
Isicelo sefomu yokwamkelwa
Abafaki zicelo bamazwe ngamazwe kufuneka bathathe uvavanyo lobuchule bolwimi lwesiNgesi njenge TOEFL okanye IELTS.
Abenzi-zicelo bamazwe ngamazwe bayacelwa ukuba banike ubungqina bemali ukubonisa ukuba banokuhlangabezana neemfuno zemali zesikolo.
Nazi ezona yunivesithi zibalaseleyo zamaKristu e-USA zidweliswe ngokungacwangciswanga ngokwezikhundla.
University of Taylor
College of Ozarks
IBygham Young University
IYunivesithi yaseConcordia Irvine
North University University
University of Samford
University of Whitworth
Kuluhlu lwethu lokuqala lwezona yunivesithi zibalaseleyo zamaKristu e-USA yiYunivesithi yasePepperdine, iyunivesithi yophando yabucala eMalibu, eCalifornia, kwaye inxulunyaniswe neeCawe zikaKristu. Iyunivesithi ineekhampasi kwezinye iindawo zase-United States nakwamanye amazwe kodwa eyona campus iphambili iseMalibu.
Iyunivesithi inamacandelo amahlanu. I-Seaver College, esisikolo esiphantsi kwesidanga sokuqala, kunye nezikolo ezine ezithweswe izidanga: iCaruso School of Law, iSikolo seZidanga sezeMfundo kunye nePsychology, iSikolo soShishino iGraziadio, kunye neSikolo soMgaqo-nkqubo woLuntu. Ngezi zikolo, kubonelelwa uluhlu olubanzi lwezifundo zemfundo ezikhokelela kwi-bachelor, master's kunye nezidanga zobugqirha.
Isikolo sizibophelele kweyona migangatho iphezulu yokugqwesa ezifundweni nakwimilinganiselo yobuKristu.
Le yenye yezona yunivesithi zindala zevangeli zamaKristu e-USA yasekwa ngo-1846. Sisikolo esincinci esinomhlaba nje oziihektare ezingama-950 e-Upland, e-Indiana, ke ngoko, ubhaliso lusezantsi. Iinkqubo zokufunda zabangekabinazidanga, abanezidanga kunye nezomgama ziyafumaneka.
Zingaphezulu kwe-100 iinkqubo zesidanga sokuqala ezibonelelwayo kunye noluhlu olubanzi lweenkqubo ze-master ezibandakanya i-Master of Arts kwiZifundo zeNkolo kunye ne-MBA.
Ngaphandle kokuba phakathi kwezona yunivesithi zibalaseleyo zamaKristu e-USA, iYunivesithi yaseTaylor ibekwe kwindawo eyiNombolo ye-1 yekholeji egqwesileyo yaseMidwest yi-US News & World Report. Umxholo wemfundo kuTaylor kukudityaniswa kokholo kunye nokufunda ngolwazi kunye nokholo lokuqeqesha abafundi ukuba babenamandla aphezulu.
IKholeji ye-Ozarks okanye i-C ye-O, njengoko idla ngokubizwa ngokuba, yenye yeeyunivesithi zamaKristu e-USA, yasekwa ngo-1906 njengekholeji yobuKristu yabucala enxulumana neCawa yaseRhabe.
Ikwabekwe kuluhlu lwethu lwe ezona kholeji zincinci zibalaseleyo eMidwest. Ubungakanani bekhampasi bumalunga ne-1,000 yeehektare kwaye ibekwe ePoint Lookout, eMissouri. Inani elincinci labafundi lamkelwa ngonyaka. Kwaye kuphela iinkqubo zesidanga sokuqala ezinikezelwayo.
I-C of O ibeka imfundo yobuKristu ukuba isebenzise ukuqeqesha abafundi abafunde kakuhle, abasebenza nzima, nabathanda ilizwe abanesimilo esifana noKristu. Abafundi bexesha elizeleyo kule kholeji abahlawuli mali yokufunda kuwo wonke unyaka wabo wokufunda, endaweni yoko, bazibandakanya nenkqubo yomsebenzi wabafundi apho kufuneka basebenze isixa esinikiweyo seeyure ngeveki.
Le kholeji liziko labucala le-Evangelical liberal art kunye neziko lemfundo ephakamileyo elizinze e-Wheaton, e-Illinois.
Uluhlu olubanzi lwezifundo zesidanga sokuqala, izidanga kunye nezifundo zesidanga sokuqala zibonelelwa kunye nezifundo zophando kwi-archaeology, geology, anthropology, kunye nezinye ezininzi. Izatifikethi kunye neenkqubo ezizodwa zikhawulezise iinkqubo ze-MA, kunye neenkqubo zehlabathi kunye nezifundo nazo ziyabonelelwa.
IKholeji yaseWheaton yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobuKristu e-USA, izibophelele kubuKristu nakwinyaniso, ubunkokeli, kunye nobukhoboka, kwaye ixhasa ikharityhulamu engqongqo ngokwezemfundo ekhuthaza isidima.
Eyasungulwa ngo-1831 phantsi kweCawa ye-Methodist Episcopal, iYunivesithi yaseWesley yenye yeyunivesithi yamaKristu e-USA eyasungulwa njengeyunivesithi yabucala yobugcisa eMiddletown, Connecticut. Iikhosi kumacandelo ahlukeneyo kunye namakhondo omsebenzi anikezelwa kumanqanaba ezifundo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala.
Ikharityhulamu evulelekileyo kwimingeni yaseWesile kwaye ifundisa abafundi ukuba bacinge ngokuyilayo, babe bukhali ngokwasengqondweni, kwaye bathathe imingcipheko enentsingiselo. Oku kuyakunceda ukulungiselela abafundi ukuba baphumelele kwikhondo lomsebenzi emva kwesikolo.
Idityaniswe neBandla likaYesu Krestu labaNgcwele beMihla yokuGqibela kwaye yasekwa ngo-1875 njengeyunivesithi yophando yabucala eProvo, Utah, IYunivesithi yaseBrigham Young yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobuKristu e-USA. Imfundo apha yenzelwe ukomeleza abafundi ngokomoya, ukwakha isimilo sabo, ukomeleza ingqondo, kwaye ikhokelele ekufundeni nakwinkonzo yobomi bonke.
I-BYU yahlulwe yaziikholeji ze-11 kunye nezikolo ezibonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo zemfundo ezibandakanya ishishini, umthetho, ubunjineli kunye nezolimo. Ngaphezulu kwe-180 yee-majors zesidanga sokuqala, iinkosi ezingama-64, kunye neenkqubo zobugqirha ezingama-26 ziyafumaneka ukuba ukhethe kuzo.
Le yenye yeeyunivesithi zamaKristu e-USA ezifumaneka eGrand Rapids, eMichigan, kwaye yasekwa ngonyaka we-1876. Liziko labucala, iVangeli elinikezela ngaphezulu kwe-100 yeenkqubo zemfundo kwizidanga zokuqala nakwimfundo yaphambi kobungcali kunye neenkqubo zokuthweswa isidanga onokukhetha kuzo. Umlinganiselo womfundi kwi-faculty yi-13 ukuya ku-1 kwaye onke amalungu e-faculty angamaKristu azinikeleyo.
I-Scholarship kunye namathuba oncedo lwezezimali ayafumaneka kwaye abafundi bamanye amazwe bamkelwe. Abafundi apha bayakufumanisa imfundo enesibindi kunye notshintsho esekwe kwinkolelo yobuKristu.
Ngokunxulumana nenkolo yobuBhaptizi kwaye iseLynchburg, eVirginia, iYunivesithi yaseLiberty yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobuKristu eMelika. Yahlulwe kwiikholeji ze-17, kubandakanywa nesikolo samayeza osteopathic kunye nesikolo somthetho, esibonelela ngoluhlu olubanzi lweenkqubo zemfundo kumanqanaba ezifundo zesidanga sokuqala kunye nesidanga.
Ezi nkqubo zikhokelela kwi-associate's, bachelor's, master's, kunye nezidanga zobugqirha. Abafundi bamazwe ngamazwe bamkelwe esikolweni kwaye iinkqubo ze-intanethi nazo ziyanikezelwa.
Le yikholeji yobugcisa benkululeko yabucala eMontecito, eCalifornia kunye nobudlelwane bobuKristu. KwiKholeji yaseWestmont, ukholo kunye nolwazi zinyuselwa inkonzo kaKristu. Izidanga zesidanga sokuqala, kwii-majors kunye nabancinci, iinkqubo zobuchwephesha kunye nezobuchwephesha kwiinkalo ezahlukeneyo ziyanikezelwa.
Abafundi bamazwe ngamazwe bamkelwa kuzo zonke iinkqubo zayo kwaye iimfuno zesicelo sokwamkelwa ziyafana ngaphandle kwabafundi bamazwe angaphandle abangenisa uvavanyo lobuchule bolwimi lwesiNgesi.
IYunivesithi yaseNyakatho-ntshona iseKirkland, eWashington, kwaye inonqulo kunye neAssemblies of God. Unxulumano, i-baccalaureate, ii-master's, kunye nezidanga zobugqirha zinikezelwa kule yunivesithi yabucala yobuKristu. Isikolo sinezikolo ezisixhenxe kunye neekholeji, ezibandakanya iKholeji yoBuphathiswa, iKholeji ye-Mark kunye ne-Huldah Buntain ye-Nursing, iSikolo soShishino, kunye neZiko leZifundo zobuNkokheli.
IYunivesithi yaseNyakatho-ntshona iphakathi kweyona yunivesithi ingcono yamaKrestu eMelika kwaye ijolise ekuncedeni abafundi ukuba bakhule babe ziinjongo zikaThixo- kwezemfundo, ngokomoya nangamakhondo omsebenzi.
IYunivesithi yaseBaylor yenye yeeyunivesithi zamaKristu eMelika esekwe ngo-1845 njengeyunivesithi yophando yabucala, okuthetha ukuba, kuya kubakho iikhosi ezininzi zesayensi kunye nophando olugxile kuphando. Ime eWaco, eTexas, kwaye yeyona yunivesithi indala isebenza ngokuqhubekayo eTexas.
Iinkqubo zibonelelwa kwisidanga sokuqala, isidanga, kunye namanqanaba obuchwephesha akhokelela kwi-bachelor, master's, nakwiidigri zobugqirha. nangona imfundo yayo ibalaseleyo, abafundi baxhotyiswa ngombuzo kunye nezinto ezintsha ezivela kumbono wobuKristu.
Ifumaneka e-Irvine, eCalifornia, kwaye yasekwa ngo-1976, iYunivesithi yaseConcordia i-Irvine yenye yeeyunivesithi zamaKristu eMelika. Kukho izahlulo zezikolo ezihlanu ezenzelwe ukubonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo zemfundo kwiindlela ezahlukeneyo zomsebenzi.
IKholeji kaKrestu (iSikole seTheology)
Isikolo soBugcisa kunye neNzululwazi
Isikolo seZifundo zoBuchule.
Ngezi zikolo, iCUI ibonelela nge-bachelor, master's, kunye nezidanga zobugqirha ngeendlela ezininzi ze-intanethi kunye neqela lengingqi. Ezi nkqubo ziyilelwe ukulungiselela abafundi amabizo abo kwaye baphile ubomi obunempumelelo bobuKristu.
IYunivesithi yaseNorth Central yenye yeeyunivesithi eziphezulu zamaKristu e-USA yasekwa ngo-1930. Yiyunivesithi yabucala eMinneapolis, eMinnesota, eU.SA, kwaye inxulumene ne-Assemblies of God.
Zonke iiprogram ze-bachelor ezibonelelwayo ziqulethe ii-cores ezintathu; undoqo wemfundo jikelele, undoqo wezifundo zobuKristu, kunye nondoqo ongundoqo. Abafundi bakwafuneka ukuba baye kwinkonzo yecawa yemihla ngemihla kunye nolunye ulwakhiwo lobuKristu ngokuzithandela.
Isikolo sikwahlulwe saba ziikholeji ezintlanu ezizezi; iiKholeji zezoShishino kunye neTekhnoloji, ubuGcisa obuBuchule, ubuNkokheli beCawa, ubuGcisa kunye neSayensi, kwaye ekugqibeleni, iKholeji yesiDanga kunye neMfundo yobuGcisa elawula iinkqubo zeenkosi kunye nezobugqirha.
Le yunivesithi ifumaneka eHomewood, eAlabama, kwaye yenye yeeyunivesithi zamaKristu eMelika. Yasekwa njengeKholeji yaseHoward kwi1841 kwaye isasebenza ukuza kuthi ga ngoku ukubonelela ngeenkqubo ezintsha ezikhokelela kwisidanga, isidanga sobugqirha kunye needigri zobugqirha. Ukuba ubhalisa kwinkqubo yesidanga sokuqala, kukho ngaphezulu kwe-170 majors kunye nabantwana onokuthi ukhethe kubo.
Ukufundiswa kunye namathuba oncedo lwemali nawo ayafumaneka ukuxhasa abafundi. Abafundi bamanye amazwe bamkelekile ukuba bafake izicelo.
IYunivesithi yaseWhitworth yiyunivesithi encinci eSpokane, eWashington, kwaye ikuluhlu lwethu lokugqibela lweeyunivesithi eziphambili zamaKristu eMelika. Le yunivesithi incinci, ke ayizukuxinana okanye idume oko kuthetha ukuba uninzi lwabantu aluzukufaka isicelo apha rhoqo ngonyaka ngalo ndlela kuncitshiswa izinga lokukhuphisana kunye nokunyusa amaxabiso okwamkelwa.
Ukuba ufumana ithuba lokujoyina le yunivesithi ukuze ulandele naziphi na iinkqubo zayo zesidanga sokuqala, isidanga, okanye isidanga sokuqala kuya kubakho izixhobo ezininzi zokujikeleza kwaye kuya kubakho inani eliphantsi labafundi kwilungu ngalinye lefakhalthi. Oku kuyenza ibe yindawo elungileyo yokulungisa iitalente zakho kunye nokukhulisa amandla akho ngokupheleleyo.
Oku kuzisa isiphelo kwiiyunivesithi ezili-15 eziphezulu zamaKristu e-USA kwaye oku kukwabonisa uluhlu olubanzi lwezikolo onokuthi ukhethe kuzo kwaye uziphonononge kwindawo yobuKristu.
Kukho malunga ne-140 yeeyunivesithi zamaKristu e-US
IYunivesithi yaseLiberty yeyona yunivesithi yamaKristu ithandwayo eMelika ihlala ngaphezu kwabafundi abali-108,000.
IYunivesithi yaseLiberty yeyona yunivesithi inkulu yabucala eMelika
Eyona kholeji yamaKristu ingabizi kakhulu okanye efikelelekayo e-US yiRio Grande Bible Institute enomrhumo wonyaka wokufunda we-1,200 yeedola elandelwa yiYunivesithi yaseMelika kunye nomrhumo we-$2,500 ngonyaka.
Ngaba zikho iiyunivesithi zasimahla zamaKristu eMelika?
Azikho naziphi na iiyunivesithi zasimahla eMelika, unokufumana kuphela ezifikelelekayo njengeDyunivesithi yaseMelika kunye neRio Grande Bible Institute.
IYunivesithi yamaKristu iAmes | Imirhumo, iScholarship, uPhononongo, uKwamkelwa
Iidyunivesithi ezili-15 eziSimahla kwizifundo zesiDanga seeMasters eMelika
Izifundo zasimahla ze-Intanethi ze-17 ezinesiqinisekiso sokuGqibela
IiYunivesithi eziGqwesileyo zezoQoqosho eIndiya
IiNyuvesi eziSimahla zeFundo zaseMelika eMelika kunye nendlela yokufaka isicelo ngasinye
Izikolo eziBalaseleyo zoBunjineli ze5 eTexas ngeeScholarship
9 Iikholeji zeBhayibhile zePentekoste zasimahla ezikwi-Intanethi omele uyazi
Iikholeji zeBhayibhile ezikwi-Intanethi eziPhantsi eziBiza amaxabiso aphantsi ezifumana iiNkcukacha zokungeniswa
Iidyunivesithi ezilungileyo zobuKristu eMelikaIiyunivesithi zamaKristu eMelika
Post Previous:Izikolo eziPhambili zePrayimari ezili-15 eLagos eNigeria
Okulandelayo Post:Iindlela ezili-15 zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kuBafundi baseTshayina ngeNzuzo
Isabelo Uncedo Pro UK: Fumana Eyona Igqwesileyo kwi-Intanethi Uncedo lomsebenzi E-UK Nge-50% yesaphulelo!